MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးအရေး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆို
ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးအရေး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆို
ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများအားလုံး ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို အလေးထားပြီး အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့တို့ နှစ်ဖက်အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင် ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်ကြတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေက ဒီနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။
လာမယ့် မေလ ၂၈ ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာပြုလုပ်မယ့် အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အိုတို့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးစေလိုတဲ့အတွက် အခုလို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရာမှာပါဝင်တဲ့ ဦးစိုင်းထိန်လင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“ကချင်ပြည်နယ်မှာ သမိုင်းအစဉ်အဆက် အခုချိန်ထိနေခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုဟာ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ သွတ်သွင်းတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ ကျနော်တို့လူမျိုးစုနယ်မြေတွေဟာ တိမ်မြှပ်နေတယ်၊ နောက်ကျနော်တို့ဟာ ပြောရေးဆိုခွင့်ဟာလည်း မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကမ္ဘာနဲ့မြန်မာကိုသိဖို့အတွက် စည်းဝေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီမှုများ ချမှတ်တဲ့အခါမှာ ကချင်လူမျိုးစုအတွက် အဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒေသခံ ရှမ်းလူမျိုးစုများအပါအဝင် တခြားတိုင်းရင်းသားများရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ အခွင့်အရေးကိုလည်းပဲ မထိခိုက်ဖို့အတွက် အလေးထားနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့က သဘောထားထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
အဲဒီကြေညာချက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ကချင်မဟုတ်တဲ့ ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး ဆွေးနွေးပေးဖို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂက ပြဌာန်းထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ အခွင့်အရေးကိုလည်း အားလုံးကလေးစားလိုက်နာကြဖို့ တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။
မြစ်ကြီးနား၊ တာလောကြီး၊ ဝိုင်းမော်၊ ခတ်ချိုစတဲ့ မြို့ရွာတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း ၃၁ ယောက်က ဒီကနေ့မြစ်ကြီးနားမြို့ ၀န်းသိုကျောင်းတိုက်မှာ အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။
at 5/25/2013 10:01:00 PM
▼ May 19 - May 26 (53)
ပြည်တွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေ...
တရုတ်မျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ … အရေးတော်ပုံ အောင်ပါစီ
ပထမဆုံး ပြည်တွင်း၌ ပြုလုပ်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး...
KIO/KIA DAT KASA NI HPE MYU SHA NI WU WU DI DI HKA...
DUNG (36) GINRA HU NA KAW GASAT
အစိုးရတပ်နှင့် KIO မုန်ဂိုးဒေသတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်
KIO မှ ကိုယ်ပိုင် တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်တော့မည်
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ပြသနာသည် အစိုးရအဆက်ဆက် သေ...
“မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူ အာဏာရှိတယ်ဆိုတာ... အမေရိကန်က ...
MAHTAI TAM AI KUN? HPAILA TAM AI KUN?
ဦးတေဇ နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ
ဗမာစစ်သားများ၏ မဒိမ်းကျင့်ခံရသော မချာဆီးဟဲ့၏ ထွက်ဆ...
အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အိုတို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တရုတ်က...
တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရ...
"၀" အဖွဲ့မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ...
KIO နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ထိရောက်မှု ရှိစေရန် ...
ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ ထောက်ပံ့မှု အခက်အခဲဖြင့်...
RAM AI NGU NA KUN?
ဖားကန့်မှာ ကျောက်စိမ်းတွင်းပြို ၃ ဦး သေဆုံး
US နှင့် UK မပါဘဲ အစိုးရနှင့် KIO မေလကုန်ပိုင်း မြ...
KIO နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် တ...
၀ တပ်ဖွဲ့၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု သတင်း နှင့် ဓာတ်ပုံမ...
စစ်ပြင်ဆင်မှု ကြားထဲက KIA နှင့် အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ
မီးစတဘက် ရေမှုတ်တဘက်ပေါ်လစီကြောင့် ပြည်ထောင်စု တစစီ...
မြန်မာနိုင်ငံမှ အကျိုးစီးပွားများစွာတို့၏ စစ်ပွဲတစ...
DU MANAT NNA DARA LA GA
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် တရုတ်အစို...
'၀'ပြည်နယ် တောင်းဆိုမှုသည် တောင်းဆိုသင့်သည့် ကိစ္စဖြ...
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၏ ကိုလိုနီ “မြန်မာပြည်နယ်”
SHD. HPAU SHAU GUN HPE MYEN NI JAWM ADUP
Htoi Ningshawng Hpaji Jawng Hpaw Hpang
၀ တပ် ဖွဲ့မြန်မာ ပြည်ထဲ မှ ခွဲ ထွက် ဖို့ကြံစည်...
ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရ မေလ ၂၈ ရက်နေ့ မြစ်ကြီးနား မှာ...
မိုးကျတော့မည် ... ၊ ကျောင်းဖွင့်တော့မည် ... ကချင်ြ...